तिथि मेरो पत्रु » हरेक मानिस पहिलो तिथि मा के वेवास्ता गर्नुपर्छ
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 23 2020 |4मिनेट पढ्न
पहिलो मिति पुरुष र महिला दुवै लागि डरलाग्दो हुन सक्छ, यो राम्रो पहिलो छाप बनाउने आउँछ विशेष गर्दा. गर्दा आफ्नो पहिलो तारीख सम्भवत एक hitch बिना बन्द जाने, त्यहाँ एक पहिलो तारीख लागि एक महिला बाहिर लिदा हरेक मानिस हुँदैन केही कुराहरू छन्.
आजसम्म अबेर नदेखाउनुहोस् अप
एक पहिलो तारीख लागि समयनिष्ठ पूर्ण अत्यावश्यक छ. आफ्नो मिति सम्म देखाउँदै लेट आफ्नो मिति गलत छाप दिनेछु. त्यो तिमी सधैं tardy छन् कि छाप प्राप्त हुन सक्छ, तपाईं पर्याप्त उनको मा समय देखाउन ख्याल छैन, वा, सम्म पुग्नु, उनले उठे गरिएको छ लाग्छ सक्छ. कुनै पनि अवस्थामा, यो उनको खराब मुड राख्न बाध्य छ र आफ्नो मिति को शुरुवात गर्न एक खट्टा टिप्पणी दिन सक्छ. किनभने आफ्नो नियन्त्रणमा शक्तिहरू लेट अप देखाउन छन् भने, बनाउन तपाईंले उनको थाहा आफ्नो मिति कल निश्चित वा, यदि तपाईं को एक सेल फोन छैन, रेष्टुरेन्ट वा बैठक स्थानलाई तिनीहरूले उनको थाहा सकून्.
देखाउने छैन Disheveled र फोहर
यो मिति तरोताजा र आफ्नो सबै भन्दा राम्रो हेर्न अघि आफैलाई पर्याप्त समय दिन महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं पहिलो मिति देख Shaggy सम्म देखाउन भने, unkept, र कायरता सुँघ्न, आफ्नो मिति तपाईं बारेमा गलत छाप प्राप्त हुनेछ. आफ्नो मिति तपाईं यसरी सबै समय हेर्न र तुरुन्तै लाग्छ सक्छ बन्द. शवर आफैलाई समय प्रशस्त दिनुहोस्, दाढी, र आफ्नो लुगा फलाम. त्यो अतिरिक्त आधा घण्टा तपाईं आफैलाई आफ्नो मिति लागि देख गरिएको छ आकर्षक किनारा दिन आवश्यक समय हुन सक्छ, र सम्झना, समय भएको छैन मिति लागि साफ गर्न यसको नतिजा गर्न हानिकारक हुन सक्छ. एक राम्रो groomed तरिकाले तैयार मानिस stinky slob हरेक समय बाहिर जीत हुनेछ.
जाँच छैन अन्य महिला अगाडि उनको
जब तपाईं एक महिला संग मिति मा जाने, तपाईं मिति अवधि को लागि उनको आफैलाई प्रतिबद्ध छ. यस कारण, यो तपाईं मिति मा हुँदा बिल्कुल लाइन बाहिर बाहिर अन्य महिला जाँच गर्न छ. यो अशिष्ट र अस्वीकार्य छ. निरन्तर सम्भवत आफ्नो मिति असुरक्षित गर्नेछ द्वारा अन्य महिला पैदल खलबलिएको र निश्चित भइरहेको उनको तपाईं उनको रुचि हो कि छाप दिन छैन. तपाईं लगातार उनको काँध मा अर्को तालिका मा तातो गोरा देख रहे भने, एक दुई कुराहरु व्यावहारिक हुन प्रत्याभूति गर्दै: 1) आफ्नो मिति बारे आफु धेरै खराब महसुस हुनेछ, त्यो सोच आकर्षक वा अनावश्यक छ, वा 2) आफ्नो मिति अत्यन्तै क्रोधित र तपाईंसँग नाराज प्राप्त हुनेछ, घर खराब ड्राइभ र दोस्रो मिति एक कम मौका लागि बनाउने.
कुराकानी हावी छैन
एक पहिलो तारीख मा जब, के तपाईं बारेमा कथाहरू र रोचक tidbits तपाईंको केटी प्रभावित आवश्यकता महसुस हुन सक्छ. त्यो एकदम ठुलो कुरा हो, तर overboard जाने छैन. सम्झना कुराकानी दुई मान्छे बीच छ, छैन एक व्यक्ति अर्को मा कुरा. यो आफ्नो मिति केही चाखलाग्दा कथा र विचार साझेदारी गर्न एक महान विचार छ, तर बनाउन तपाईंले पनि उत्तिकै कुराकानीमा भाग लिन उनको पर्याप्त समय दिएर निश्चित. बारेमा आफु उनको प्रश्न, यो उनको देखाउने तपाईं एक व्यक्तिको रूपमा उनको बारेमा चासो हो र तपाईं उनको बारेमा थप जान्न मौका हुनेछ.
रुनु र Complain गर्छन्
हो, हामी सबै हाम्रो खराब दिन थियो, तर मिति (विशेष गरी एक पहिलो तारीख) तपाईंको शिकायत को सबै हावा ठाँउ हो. संभावना, आफ्नो मिति राम्रो छ राखेका छ, जब त्यो तपाई संग पूरा मजा समय. त्यो एक 'भगवान यातायात संग अभिवादन छ भने एक painÖI यस्तो त्यो तुरुन्तै बन्द गरिनेछ यो townî घृणा थियो. तनावपूर्ण लागि सेट टोनलाई उजुरी, दु: खी मिति. भने पनि तपाईं एक taxing दिन थियो, यसको बारेमा whining रात खर्च छैन. बस खुसी हुन तपाईंलाई रुचि हो महिला संग समय खर्च गर्न. मुस्कान संक्रामक छन् तर यति frowns छन्. चाहे तपाईं थाहा वा, आफ्नो खराब मुड आफ्नो मिति असर गर्न सक्छ र त्यो तपाईं कस्तो महसुस. तपाईं आफ्नो मिति हास्यास्पद र upbeat रूपमा सम्झना गर्न चाहनुहुन्छ, एक downer.
अति शारीरिक आक्रामक नगर्नुहोस्
यो आफ्नो मिति चुम्बन लागि जानुअघि तपाईं दिन्छ संकेत मा पढ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ (वा बढी). नगर्नुहोस् स्वतः बस किनभने तपाईं आफ्नो मिति अर्को स्तरमा आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध लिन तयार छ कि एक राम्रो मिति छन् कि लाग्छ छैन. तपाईं आफ्नो मिति चुम्बन मा रुचि छ भने, हात होल्डिंग संग बन्द सुरु, अंगालो, र बिस्तारै एक चुम्बन गर्न निर्माण अप. सधैं आफ्नो मिति गरेको शुभकामना आदर. यदि त्यो कुनै पनि शारीरिक प्रगति गर्न कुनै भन्छन्, अंकित मूल्य मा उनको प्रतिक्रिया लिन र बन्द फिर्ता. धेरै आक्रामक छ मानिस यो एक महिला बन्द गर्न सक्नुहुन्छ सम्बन्धले गर्न आउँछ र वास्तवमा महिला डराउनु वा चिन्तित बनाउन सक्छ जब.
उनको भन्नुहोस् छैन तपाईं उनको तपाईं अभिप्राय भने कल छौँ
एक महिला 'तपाईं त्यसो गर्न अभिप्राय बेला म youî बोलाउछु बताउँदा खराब विचार छ. महिला तपाईंसँग दोस्रो मिति रुचि थियो भने, उनको निराशा मात्र तपाईं दोस्रो मिति लागि कल को कुनै पनि इरादा कहिल्यै थियो मात्र सिक्न त्यो आफ्नो कल लागि वरिपरि पर्खनुहुन्छ यदि महिमा हुनेछ. तपाईं उनको कल गर्न चाहनुहुन्छ भने, बस भन्दै द्वारा मिति समाप्त 'यो राम्रो सभा थियो तपाईं वा एक सरल' गुडबाइ, को eveningî को एक राम्रो बाँकी छ. तपाईं उनको आशा मा उनको प्रमुख छैन वा प्राप्त यसरी अप. एक उल्टो टिप्पणी, तपाईं दोस्रो मिति व्यवस्था गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं उनको थाहा निश्चित.
पहिलो मिति लागि योजना ताकत-wracking हुन सक्छ, तर मितिमा गर्दा केही सरल निर्देशन निम्न सम्भव सबै भन्दा राम्रो मिति सुनिश्चित गर्न मदत गर्नेछ. तपाईं अनुकूल छन् भने, समयमा, आदर, र ध्यान दिएर, तपाईं र तपाईंको मिति संभावना ठूलो समय हुनेछ र, यो आकर्षण आपसी छ भने, आफ्नो पहिलो तारीख एक सुन्दर सम्बन्ध सुरु हुन सक्छ.